09771391484 (Yangon) English (EN)	မြန်မာ (MY)	E-mail seller	WSC Motorbike Showroom	Certified dealer	Your name
If you ask any of our numerous previous costumers. Without fail they will tell you that WSC Motorbike Showroom is the name of the best vehicle dealer you can find in Mandalay. We must hasten to say their satisfaction is not without grounds: not only do we represent excellence in selling China Brand, we can also proudly offer. Perhaps you will also find it useful to know that: Ask any of our customers, time and time again we have proven that the motorbike we offer are fantastic investments and an incomparable value for money. Be sure to mention Motors.com.mm when you talk to us! ကျွန်ုပ်တို့ WSC Motorbike Showroomသည် ၀ယ်ယူသူများကို ၀န်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးပေးနိုင်သော Showroom တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံချက်အပြည့်အ၀ရရှိထားသော Showroom တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ အဓိကထားရောင်းချသောဆိုင်ကယ်များကို တင်သွင်းရောင်းချခြင်းသာမကပဲ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ၀န်ဆောင်မှုကိုပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေသော Showroom တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Showroomသည် ၇၈လမ်း၊ ၃၆လမ်းနှင့်၃၇လမ်းကြား၊ မန္တလေးမှာတည်ရှိပြီးရုံးဖွင့်ရက်များသာမကပဲ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များမှာပါ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချပေးလျက်ရှိကြောင်းအသိပေးကြေညာအပ်ပါတယ်။ ၀ယ်ယူဖူးသူများ ထံမှလည်း ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်ကယ်များမှာ စိတ်ချယုံကြည်စွာဖြင့် ရေရည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် တန်ဖိုးနဲ့ ထိုက်တန်သောဆိုင်ကယ်များဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံထားရသော Showroom တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ် ၀ယ်ယူလိုပါက ဖော်ပြပါ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်များမှတဆင့် ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်မေးမြန်း လျှင်လည်း Motors.com.mm မှတဆင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်းပြောကြားပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။” Ratings
There are no comments for WSC Motorbike Showroom! Be the first to comment!